दलाल मानसिकताका मानिसहरु रवि विरुद्ध सलबलाएका छन - Nayabulanda.com
दलाल मानसिकताका मानिसहरु रवि विरुद्ध सलबलाएका छन
७ असार २०७५, बिहीबार ०८:३७ 60 पटक हेरिएको
‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग’ नामको कार्यक्रम बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन बाट सुरु भएको हो,जसको संचालन डा. नवराज लम्सालले गर्ने गर्थे । सुशील कोईराला लगायतको पालामा रोकिएको उक्त कार्यक्रमलाई ओली प्रधानमन्त्री भए पछि निरन्तरता दिइयो र प्रस्तोता भए- रवि लामिछाने । कागजी रूपमा रवि त्यतिबेला पनि अमेरिकी नागरिक थिए । पासपोर्ट त्यागेका थिएनन । तर स्वीकार्य भए । पछि प्रचण्ड सरकारको पालामा उनलाई जबर्जस्ती हटाइयो र वविन शर्मा नामका पत्रकारलाई प्रस्तोता बनाइयो ।
रविले न्यूज २४ टि भी बाट काऊन्टर कार्यक्रम सुरु गरे ‘सिधा कुरा जनता संग’ जसले प्रधानमन्त्री संग गरिने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग’ लाई सम्म ओझेल पारिदियो ! किनकि त्याहाँ उनले सर्वसाधारणका साना-ठूला समस्या उठाइदिएर नागरिकको मन जित्ने काम गरे ।
वर्षौंको कुशासन बाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकले रविको कामलाई देवत्वकरण गर्न नै बाध्य भए जुन नितान्त स्वाभाविक हो,प्रकृतिक हो । यस बिच देशमा धमिराको रूपमा रहेका केही दलाल मानसिकताका मानिसहरु विशेष गरी पत्रकारहरु र त्यसमा पनि विशेष तत्कालीन माके सम्बद्ध पत्रकारहरुको नजरमा रवि बिझाए । उनका नागरिकता लगायतका कमजोरी खोजेर प्रहार गर्ने काम गरियो ।
रविले विदेशी पासपोर्ट त्याग्ने र आजीवन देशको लागि काम गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरे र त्यही अनुसार प्रक्रिया गरिरहेका पनि छन । उनले विदेशी पासपोर्ट सम्बन्धित देशको दूतावासलाई बुझाइसकेका छन । क़ानूनी प्रक्रिया लम्बिएको एहेम मौका पारी एकपटक फेरि तिनै दलाल मानसिकताका मानिसहरु रवि विरुद्ध सलबलाएका छन । दलको तलवा चाटेर पेट भरेकाहरु अहिले छाद्न आतुर छन ।
रवि गैर क़ानूनी थिए भने ओली पहिलो पटक प्रम हुने बेला नेपाल टेलीभिजनमा ल्याइने बेला नै थिए । तर त्यतिबेला कोही बोलेनन किनकि त्याहाँ नेताको सुश्रुशा थियो अहिले जनताको सेवा गरिरहेका छन,दलालहरु उनी माथि खनिएका छन ।
देश सतिले सरापेको देश हैन,दलालले हडपेको देश हो । तर हामी हार नमानौं । रविले क़ानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नेछन र दलालहरुको ढाड सेकिरहनेछन ।
लामिछाने रवि मात्र किन ? नागरिक चेत भएका तपाइँ हामी सबै रवि हौं । बस् , तपाइँ हरु आफ्नो आफ्नो ठाउँ बाट सर्वसाधारणलाई सु-सूचित गरिरहनोस् ।
दलालीकरण विरुद्धको आन्दोलन लामो हुन्छ । हामी धैर्यताका साथ हजारौं रविहरु जन्माउने अठोटका साथ अघि बढौं ।